Nahoana Isika no Tokony ho Traveling Ao Eoropa In Spring | Save A Train
Home > Travel Europe > Nahoana Isika no Tokony ho Traveling Ao Eoropa In Spring
Ny olona rehetra dia manonofy ny Spring ho an'ny mafana. Tsy azo atao mihitsy fotoana tsara tarehy tany Eoropa, rehefa ny oram-panalan'i ririnina manome lalana ny fanavaozana ny lohataona. Valan-javaboary sy tonga velona ny zaridaina ary velona indray ny tanàna. Mandeha any Eoropa amin'ny lohataona, mialoha ny fahavaratra maro be, mahafinaritra ihany koa ny fotoana ampahany ny vahoaka Eoropeana raha ny fitandremana ny vola lany any amin'ny namana sorony-vanim-potoana tahan'ny. Tsy hojerentsika ny sasany amin'ireo tena toa marina, mampientam-po, ary toerana mahavariana ho an'ny Traveling in Europe amin'ny Lohataona.
Ny zavatra voalohany izay tonga ao an-tsaina rehefa mandeha any Eoropa amin'ny lohataona:
lohataona Voankazo sy legioma In Eoropa Markets (ary Restaurants!)
Airfares dia mora vidy kokoa
Hotels dia mora vidy kokoa
Rental fiara dia mora kokoa ny mitahiry ny amin'ny fifanarahana fa vidin-.
Tranom-bakoka S Tsy Feno
Lamasinina foana mora kokoa rehefa mividy amin'ny Save A Train ny Train Tickets.
Ary farany nefa tsy ny kely indrindra, ny Eoropeanina no an-trano. Tsy misy mpizahatany clogging ny arabe sy ny toerana tena toeram-pisakafoanana, ary izao no fotoana ahafahan'izy ireo mihinana sy milalao soa aman-tsara–ary izany mora vidy kokoa!
Ankafizo ny sakafo mandritra ny diany any Eoropa amin'ny lohataona:
Efa nanoratra izahay lahatsoratra vitsivitsy momba ny sakafo. Azonao atao ny mamaky azy ireo ETO ary ETO. Noho izany tsy mahagaga fa manana sakafo ho toy ny nisongadina ny mpitety tany Eoropa in Spring!
Rehefa ela ny ririnina ny natsatsika-paka legioma, Romans Manantena mangidy maitso antsoina hoe puntarella, ny endriky ny chicory. Ny tara-pahazavana amin'ny ririnina dia maniry ao Lazio. Izany ny harbinger ny lohataona, manao akanjo kely sy menaka voatetika anchovy. Delish!
Italiana lohataona tsena, hahita maro mahazatra sy ny tsy mahazatra ny maro legioma. Hisy mbola ho artichokes amin'ny lohataona (Misaotra fahatsarana), ary dia ho lafo, fa hisy maro isan-karazany. Ny toerana tena no spiny artichokes Sisila sy Sardinia. Izy efa nivoatra ho lasa ny ondry shoo; saika isaky ny fototra ao Sardinia dia manana tsilo!
Oddities hafa ahitana ny toerana tena, agretti, ao amin'ny honahona, ahitra izay saute amin'ny menaka kely ary ny sasany tongolo gasy, mampahatsiro sakafo kely mihitsy raha satria manana saltiness raiki-tampisaka eo amin'ny toerana nahaterahana. Misy ihany koa ny Cardoons (cardoni amin'ny teny italiana, ny havana ny artichoke) ary ny tongolo-toy ny jiro eo amin'ny sary antsoina hoe lampascione, tena manokana hyacinth karazana jiro izay indray mandeha cucina povera, ny fandrahoan-tsakafo ny mahantra, nefa ankehitriny efa tonga tena toy ny lafiny-damaody lovia in Puglia voaro “amin'ny diloilo” na an-menaka.
Messina ho Catania Lamasinina
Syracuse ho Catania Lamasinina
Taormina ho Catania Lamasinina
Palermo ny Catania Lamasinina
Anarana iombonana amin'ny Food:
Ny bibidia frezy Frantsa dia tsy maintsy! na dia saro-tadiavina, ny frezy lehibe ao amin'ny Aveyron dia manokana sy masaka aloha noho ny zaridaina frezy.
Spring ihany koa ny fanombohan'ny iray volana roa-Asparagus fety ao amin'ny Vale ny Evesham in Worcestershire ao amin'ny Cotswolds. White Asparagus vanim-potoana tany Alemaina sy ny avaratr'i Eoropa manomboka in May.
Eny, ny olona tany Eoropa any rehetra avy amin'ny hankalaza Asparagus, fotsy, maitso, na bibidia rehefa mivoaka ny rehetra.
Gresy dia manana be izany fanahin'ny fanangonana sy ny maro tamin 'ny lohataona ihany legioma toy ny Italia.
ankehitriny, ampy ny sakafo. Bebe kokoa momba ny tena mandeha!
Mihevitra aho fa afaka rehetra manaiky fa misy ny ratsy na oviana na oviana ny fotoana ho any Paris. Na izany aza, misy zavatra manokana momba ity tanàna ity, ary ny olon-tiany gastronomic mahafinaritra tonga amin'ny lohataona. Ny fanaovana izany Tena mendrika Mandeha any Eoropa amin'ny lohataona!
The hatsarany de Paris ao amin'ny lohataona be fotsiny. Avy picnicking manoloana ny Tour Eiffel ny mivezivezy an-tanàna ny maro miavaka zaridaina, dappled nivahiniany ny amoron 'ny Seine, talaky masoandro maraina mihoatra ny vaovao sy ny latte Croissant, husky eves ny Pernod sy ny divay mena - voahodidina mamelana chestnut Aseraha, mamelana zaridaina, ary tena mahatalanjona manga andro lohataona.
nefa resy lahatra?
Ny ampahany tsara indrindra dia ny tsipika. Na ny tsy fisian'ny azy, tokony hoe:. Ny Louvre sy ny Tour Eiffel dia tsy toy ny matevina toy ny efa ho Summertime.
Ny lehibe miampy ny lohataona any Paris no Mañana de Musée na Night ny Museums. Izany rehefa tranombakoka, kanto lalan-, ary ny ara-kolontsaina manerana ny tanàna foibe hanokatra ny varavarana iray alina tamin'ny Mey mba mpitsidika dia afaka mahatsapa ny sasany ny tsara indrindra kanto eto amin'izao tontolo izao amin'ny fomba hafa mihitsy: ary maimaim-poana tanteraka tara be amin'ny alina.
Mandeha any Eoropa amin'ny lohataona – Eoropa atsinanana – Hongria:
Rehefa milatsaka ny fotsy ho any lohataona, ny Hongroà renivohitra tena tonga amin'ny fiainana. Tena mamporisika ny seho fety izahay Budapest amin'ny lohataona. Misy lafiny rehetra ny hetsika ara-kolotsaina ary ny fampirantiana ny hanatrika. Mpitsidika dia afaka am-pofoany ny fanao isan-taona Pálinka Festival, mampiseho tastings mahery 300 karazana Brandy, raha ny Spring Festival, roa herinandro mahatalanjona, mitaona ao amin'ny sarambabem-bahoaka ao sy ny Fusion ny Alaina, jazz, sy izao tontolo izao fampisehoana mozika.
Ity lehibe lisitry ny zavatra tokony hatao ao Spring in Budapest:
Mitaingina ny Budapest Eye Jereo ilay voaroy mamelana ao amin'ny ELTE Botanical Garden
Mihinàna sakafo teo am-kamiao zaridaina
Ankafizo ny breezy BKK mitaingina baka manana andro fatra-pitia amin'ny sakafo fety
Pijery an-trano manan-tantara eo an-toerana nandritra ny Budapest100 Find asa tanana ao amin'ny Budapest Spring Fair Get entana ao amin'ny tsena Alahady in rava trano fisotroana
Traverse an-tanàna ny lalany mihazakazaka rubberized
Alao ny chairlift ho avo-manidina mitaingina
Tsidiho ny mandresy lahatra Sip fampirantiana asa tanana ao an-toerana labiera amin'ny lavarangana Hangouts
ny https://www.youtube.com/watch?v = nipHsxjBVaE
Ny mahamay Weather ampahany Mandeha any Eoropa amin'ny lohataona – Sevilla, Espaina:
Ny mampientanentana Andalusian Renivohitra nipoaka amin'ny fiainana ao amin'ny lohataona: trano fisotroana kafe sy trano fisakafoanana Buzz amin'ny angovo. Orange voniny sy ny fotsy Citrus miala mamelana, ary ny ara-kolontsaina kalandrie kicks ho fitaovana vaovao rehetra.
Raha toa ianao mahatsiaro mientanentana momba ny Lohataona sy te-mankalaza izany, Avy eo ianao eo amin'ny toerana tsara. manantena herinandro, ny fety, dihy, ary fampisehoana flamboyant ao amin'ny cobblestoned arabe. Raiki-pitia amin'ny Flamenco, ary haka ny voky mampino Andalusian saran-dalana.
Ho an'ny hetsika mahafinaritra ny miaina rehefa mandeha any Eoropa amin'ny lohataona, loha tsy mahazo manao Seville nandritra ny malaza Feria avril, na ny lohataona ara-drariny. The Sevilla Fair fomba nentim-paharazana manomboka mazava roa herinandro taorian'ny Herinandron'ny Paska, ao amin'ny faritra lehibe amin'ny fanafody (sari-tany), any atsimo-andrefan'ny tanàna, akaikin'ny ony. Izany no lehibe isan-kerinandro ny dihy, misotro, mihinana, ary fiaraha-miasa, amin'ny faramparan'ny alina – na rehetra-nighters – ny fenitra. Ny haben'ny, noho ireo porofo ny Aprily ny fampisehoana Fair dia miavaka. Avy manodidina ny mitataovovonana mandra-paharivan'ny andro tany am-boalohany – indrindra fa tamin'ny Talata, andro ofisialy voalohany – Sevilla matso fiaraha-monina manodidina ny fairground amin'ny kalesy, na mpitaingin-tsoavaly. Misy ihany koa isan'andro tolon'omby, ankapobeny Nihevitra ny tsara indrindra ny vanim-potoana.
Munich dia mahagaga taona fihodinana, Fa ny tena nisongadina dia misambotra ny tanàna mandritra ny fanao isan-taona Fruhlingsfestival, na ny lohataona festival, isaky ny Aprily / Mey. Eritrereto Oktoberfest, fa amin'ny fomba vitsy olona, fa araka labiera be 😉
Traveling farany ao Eoropa in lohataona – Dublin, Irlandy
Eny an-dalamben'i Dublin vaky ho amin'ny fiainana volana ity ho an'ny ny fankalazana ny St. Patrick ny Day. Mpitety mitsidika an-drenivohitra tamin'ny volana Martsa dia hanana be dia be mba hisambotra ny sainy. Jereo ny fitsangatsanganana an-tongotra an'ny Seranan'i Dublin, na ny malaza roa-kilaometatra-ela St. Ny Festival Patrick Parade. Ny fankalazana span manontolo faran'ny herinandro, drafitra toy izany ny afa-nandositra ny vahoaka amin'ny The K Club, 5-kintana iray firenena hita Manor 30 minitra ivelan'ny Dublin. Miaraka amin'ny Vintage 1936 Jaguar trano fiara, Whisky notsongain'ilay tastings, ary ny mpitaingin-tsoavaly tamin'ny lalana 550 hektara. Sonia antsika!
Spring ho fitaovana sy boky izay manofana tapakila amin'ny Save A Train mba hitsidika na dia iray ihany amin'ireo toerana lamasinina, in minitra!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary omeo anay fotsiny ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftraveling-europe-spring%2F%3Flang%3Dmg - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#EuroprinSpring #FoodinSpring europetravel longtrainjourneys lohataona Train Travel traveltips
Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Travel Denmark, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Nandeha lamasinina Luxembourg, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Train Travel UK, Travel Europe